ငယ်ရွယ်လိင်ကွဲဒိန်းမတ်လူကြီးများ (2006) ကြားတွင်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှု - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
မှတ်ချက်။ ။ စစ်တမ်းကို ၂၀၀၃၊ အောက်တိုဘာလမှ ၂၀၀၄ ခုနှစ်ဇွန်လအထိခေါ်ယူခဲ့သည်။ အမျိုးသားများ၊ ၁၈-၃၀၊ ပျမ်းမျှအသက် - ၂၅ နှစ်. တစ်နည်းအနည်းငယ်အသုံးပြုမြန်နှုန်းမြင့် adlosence ကာလအတွင်းနှငျ့အခြို့မှာအားလုံးအဘယ်သူမျှမအင်တာနက်ခဲ့ကြပေမည်။ ခုနှစ်တွင် သို့သျောလညျးအထီး၏ 98% သူတို့ porn ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ စိတ္တဇအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောရလဒ်များ
Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2006 Oct;35(5):577-85.
Hald GM က.
စိတ်ပညာဌာန, Aarhus, Jens Chr တက္ကသိုလ်။ Skous Vej 4, Aarhus, C ကို 8000, ဒိန်းမတ်။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
လေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက် 1-18 အသက်ဒိန်းမတ်လူကြီးများအကြားတွင်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန် (30) ခဲ့ကြ နှင့် (2) ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု, အခွအေနေလူ့နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာများအတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှုဆန်းစစ်ရန်။ တစ်ဦးကအမျိုးသားရေးစစ်တမ်းလေ့လာမှု 688 ငယ်ရွယ်လိင်ကွဲဒိန်းမတ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုယ်စားလှယ်နမူနာသုံးပြီးကောက်ယူခဲ့သည်။ အဆိုပါလေ့လာမှုကိုညစ်ညမ်းစားသုံးမှုပျံ့နှံ့နှုန်းနှင့်စားသုံးမှုပုံစံအတွက်ကြီးမားသောကျား, မကွဲပြားမှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ မိန်းမတို့အားနှိုင်းယှဉ်လျှင်ယောက်ျားတစ်ဦးအငယ်အသက်အရွယ်မှာညစ်ညမ်းထိတွေ့ခဲ့သည်အချိန်နှင့်ကြိမ်နှုန်းဖြင့်တိုင်းတာ, မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကာလအတွင်းကပိုမကြာခဏညစ်ညမ်းအသုံးပြုသောအဖြစ်ပိုမိုညစ်ညမ်းလောင်လေ၏။ အသုံးပြုမှုများ၏လူ့အခြေအနေတွင်ကျားကွဲပြားခြားနားမှုအမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက်ပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော်နှင့်အတူမကြာခဏညစ်ညမ်းသုံးပြီးအတူလည်းထင်ရှားရှိကြ၏။ အလှည့်မှာတော့ယောက်ျားကပိုမကြာခဏမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်အမျိုးသမီးတွေထက်သူငယ်ချင်းများကို (Non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်) နှင့်အတူညစ်ညမ်းသုံးစွဲဖို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ဦးစလုံးအဘို့, အသုံးပြုမှုပုံမှန်အတိုင်းရာအရပျအိမ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်နှင့်မျှမတို့သိသိသာသာကျားခြားနားချက်ဤကိစ်စတှငျရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမယောက်ျားမိန်းမတို့သည်ထက်အမာခံညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လျော့နည်း softcore ညစ်ညမ်းတဲ့ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးပိုနှစ်သက်နှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူညစ်ညမ်းပစ္စည်းများမှာသူတို့ရဲ့ဦးစားပေးများတွင်ကွဲပြားဖို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမူအကျင့်အချက်များအတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှုယောက်ျားမိန်းမတို့သည်ထက် ပို. masturbating နှင့်အတူတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေပုံစံများကန့်သတ်ခဲ့ကြသည်။ အထီးလိင်, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း, ပထမဦးဆုံးထိတွေ့မှုအနည်းဆုံးအနိမ့်အသက်အရွယ်နှင့်ငယ်ရွယ်သောအသက်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုစုစုပေါင်းကှဲလှဲ၏ 48.8% များအတွက်အကောင့်မှတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါရလဒ်များ sociocultural ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်စပ်လျဉ်းနှင့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သီအိုရီမှာဆှေးနှေးခဲ့သညျ။ ဒါဟာလူမှုရေးလက်ခံများတွင်ကျားမကွဲပြားမှု, ကျား, မကျပုံစံ, ကျားမလိင်များ၏အစဉ်အလာ, ကျား, မစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်မိတ်လိုက်မဟာဗျူဟာမှလိုက်နာမှုညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအတွက်ကျားမကွဲပြားမှုကိုနားလည်အတွက်အဓိကအချက်ဖြစ်ကြောင်းစောဒကတက်သည်။
သငျတနျး (PDF) FROM မှ Quote
လက်ရှိလေ့လာမှုမှာဥပမာ, ညစ်ညမ်းတဲ့အစား "တင်းကျပ်သော" ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အလုပ်ခံခဲ့ရသည်။ ထိုကဲ့သို့သော Playboy သို့မဟုတ် Penthouse တွင်တွေ့မြင်သူတွေကိုအဖြစ်သာအဖော်အချွတ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများ, ညစ်ညမ်းစဉ်းစားမခံခဲ့ရပါ။ လျှောက်ထားခြင်း
Male: အသက် 18-30 (ပျမ်းမျှအသက် 24.6)
အစဉ်အဆက်စောင့်ကြည့် porn = 97.8%
နောက်ဆုံး6လအတွင်း = 92% အတွင်း
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကြည့်ရှုခဲ့ - 63.4%
နောက်ဆုံး 24 နာရီ = 26.2% watched
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသုံးစွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံပြင်ပရှိလေ့လာမှုများစွာမှကျား၊ မကွဲပြားမှုကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားသည်။ ထို့ကြောင့်အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်ပိုမိုသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုပိုမိုဆွဲဆောင်ခြင်း၊ စားသုံးခြင်း၊ ဆက်ဆံရေးအခြေအနေနှင့်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုများကင်းမဲ့သည့်အသည်းအသန်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုပိုမိုဆွဲဆောင်ခြင်းခံရသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်တသမတ်တည်းမဟုတ် (Fisher & Byrne, 1978 ကိုလည်းကြည့်ပါ) ။ အပြာစာပေရုပ်ပုံများကနှိုးဆွသည်။ ထို့အပြင်အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်အမျိုးသားများထက်ပိုမိုသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုမတူကွဲပြားသောအပြုအမူများပြုလုပ်သောတူညီသောသရုပ်ဆောင်များနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကွဲပြားခြားနားသောသရုပ်ဆောင်များကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြသည် (Gardos & Mosher, 1999; Janghorbani, Lam, နှင့် The Youth Sexuality Task Force, 2003; Malamuth, 1996; Mosher & MacIan, 1994; Træen, Spitznogle, & Beverfjord, 2004) ။
ထို့အပွငျ Hammar'en နှင့် Johansson (2001), Janghorbani et al အားဖြင့်လေ့လာမှုများ၏ချွင်းချက်နှင့်အတူ။ (2003), Rogala နှင့် Tyd'en (2003), နှင့်Træen et al ။ (2004), ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအတွက်ကျားမကွဲပြားမှုအပေါငျးတို့သလေ့လာမှုများအထွေထွေလူဦးရေအားဤလေ့လာချက်များ၏တွေ့ရှိချက်ယဘေုယကပြဿနာအောင် nonrepresentative နမူနာအပေါ်မှီခိုပါပြီ။
အမျိုးသမီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကယောက်ျားများသည်လိင်မှုကိစ္စတွင် (ဥပမာ - တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း) တွင်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကို ပိုမို၍ မကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိပြီး၊ ငယ်ရွယ်သောအရွယ်တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းနှင့်တစ်ပတ်လျှင်အများအားဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ခြင်းအားဖြင့်တွေ့ရသည်ကိုတွေ့ရှိရသည် (p <.001 ) (ဇယား 3) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအတွက် ဦး စားပေးမှုများတွင်ကျား၊ မကွဲပြားမှုများတွေ့ရှိရသည်။ အမျိုးသားများသည်စအိုလိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ ပါးစပ်လိင်၊ အုပ်စုလိုက်လိင် (အမျိုးသားတစ် ဦး - အမျိုးသမီးများပိုမို)၊ လိင်တူဆက်ဆံခြင်းနှင့်လိင်အပျော်တမ်းလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုအမျိုးသမီးများထက်သိလိုသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်အမျိုးသမီးများသည် softcore ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ခြင်းနှင့်အုပ်စုလိုက်လိင် (အမျိုးသမီးတစ် ဦး - အမျိုးသားများထက်ပိုများသော) ကိုအမျိုးသားများထက်သိသိသာသာပိုမိုနှစ်သက်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
လေ့လာမှုများအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုနှုန်းပျံ့နှံ့မှုနှုန်းမှာသိသာထင်ရှားသော်လည်းအချို့သောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုများသည် (ဥပမာ၊ Pan, 1993) တွင်ယောက်ျားနှင့် ၅၄ မှ ၈၅% ကြားတွင်စားသုံးမှုနှုန်း ၈၆-၉၈% အထိရှိသည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည် အမျိုးသမီးများထဲတွင် (Demar´e, Lips, & Briere, 86; Gunther, 98; Hammar´en & Johansson, 54; Janghorbani et al ။ , 85; Li & Michael, 1993; Perse, 1995; Rogala & Tyd´en, 2001) ; Tyden, Olsson, & Haggstrom-Nordin, 2003) ။
ညစ်ညမ်းတဲ့မဟုတ်ဘဲတင်းကျပ်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်လက်ရှိလေ့လာမှုများတွင်အသုံးပြုခဲ့စဉ်းစား, ငါတို့သည်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု၏မြင့်ပျံ့နှံ့နေဖြင့်အံ့အားသင့်အသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေ, ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ဦးစလုံးအကြားမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကာလအတွင်းညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြသည်။ အင်တာနက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်း၏လွယ်ကူပြီးအမည်မသိရရှိနိုင်မှုသည်ဤတွေ့ရှိချက်များအဘို့အကောင့်စေခြင်းငှါ,
နားလည်မှုအတွက်ဖွယ်ရှိလူမှုရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအဓိကအချက်နှင့်ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာတွေ့ရှိခဲ့ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု၏မြင့်ပျံ့နှံ့မှုနှုန်းကိုရှင်းပြနေသောခေါင်းစဉ်: တစ်ဦးအလိုလိုယဉ်ကျေးမှုပတ်ဝန်းကျင်, ညစ်ညမ်းဆီသို့ဦးတည်နေတဲ့ဖြေလျော့ပေးခြင်းများနှင့်လက်ခံအများပြည်သူသဘောထားနှင့်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုလူမှုရေးလက်ခံတစ်ခုတိုး။
ထို့အပြင်ကျနော်တို့ကြောင်းညစ်ညမ်းယောက်ျားမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုရှိခြင်း, ဒါပေမယ့်အမျိုးသမီးတွေသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုရှိခြင်းခံခဲ့ရသည့်အခါအချိန်ကိုသာ 53.8% ခဲ့ကြသည်အခါအချိန်ကာလပါဝင်ပတ်သက် 16.8% ခဲ့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
အများစုမှာညစ်ညမ်းပစ္စည်းပေါ့ပေါ့ Non-COMMITTEE ပထမအကြိမ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဆန္ဒရှိနေသောမိန်းမ, အဘယ်သူသည်ဤကဲ့သို့သောငယ်ရွယ်စဉ်အဖြစ်မွေးဖွား, မျိုးပွားနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုနှင့်ဆက်စပ်တွေကို, အပြည့်အဝနှုတ်ခမ်း, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအရေပြား, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမျက်စိတစ်စည်းစိမ်ကိုဖော်ပြရန်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါသည် , တောက်ပဆံပင်, ကောင်းသောကြွက်သားသေံ, တွေ့ရှိရပါသည်၏မရှိခြင်းနှင့်မျက်နှာ symmetry (Buss, 2003; Rossano, 2003) ။ အနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမ Post-မိတ်လိုက်ကတိကဝတ်သို့မဟုတ်မိဘရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတောင်းဆိုသူအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောမြေသြဇာကောင်းသောအမျိုးသမီးမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသုံးပြုနိုင်စွမ်း: တစ်ရေတိုရေရှည်လူ့မိတ်လိုက်ရှုထောင့်ကနေ, ဒီယောက်ျားရှာနေကြသည်ကိုအတိအကျကဘာလဲ
ဒါဟာနှစ်ခုဆက်စပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များ, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏အမည်ရပိုမိုမြင့်မားအကြိမ်ရေများနှင့်ပထမဦးဆုံးထိတွေ့မှုအနည်းဆုံးအနိမ့်အသက်, ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုသိသိသာသာနှင့်ခိုင်ခံ့သောခန့်မှန်းခဲ့ကြသည်ကြောင်း, သို့သော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ Janghorbani et al ။ (2003)